Saint Kotar achauya kuKickstarter musi waApril 10, 2018 | Linux Vakapindwa muropa
Mutsvene Kotar iri zita rekutyisa kwepfungwa uye zviitiko, unonakidza mutambo wevhidhiyo uyo unovimbisa zvakawanda. Mushure mekutanga iyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti, isu tanga tichizivawo kuti musi waApril 10, 2018 ichasvika paKickstarter, inozivikanwa mukurumbira chikuva chemari yekuunganidza vanhu. Mushandirapamwe uyu uchaparurwa netariro yekutsvaga mari yakakwana kuti ikwanise kugadzira zita uye kuti ichakurumidza kuoneka yeLinux, Mac uye zvakare Windows.
La nhoroondo yemutambo wevhidhiyo Iyo yakavakirwa kuguta rekare reSveti Kotar, iro riri roga uye rakavanzwa munzvimbo iri kure yeCroatia. Pakutanga kuona zvinoita senzvimbo yekutizira yekuzorora uye nekuona nzvimbo dzakanaka munzvimbo yakanyarara ine dzimba dziri kure kubva kune imwe. Asi iro rekumaruwa guta riri pakati pezvisikwa handizvo zvazvinoita, inovanza chakavanzika chikuru uye nyaya dzinonakidza uye kutendeuka kwese kusuwa uye kuora husiku ... Ndiwe protagonist yemutambo wevhidhiyo, unokokwa kupera kwaGumiguru 2006 kuchiratidziro cheunyanzvi hwepakati nepakati paSveti Kotar uye mushure mekugamuchirwa kunotonhora, uchazviwana uchipinda mune vamwe kuuraya kunoshamisa zvine chekuita nekunamata madhimoni nehuroyi. Izvo zvinokumanikidza iwe kutevedzera mimvuri kuti uone kujekesa muguta uye uwane zviri kuitika ipapo. Nyaya inonakidza pamwe neyakajeka 2.5D mifananidzo uye mifananidzo, pamwe neakanaka mutambo wemitambo ndizvo zvavanovimbisa ...
Kana iwe uchifarira, unotoziva kuti iwe uchazokwanisa kutora chikamu kubva gore rinouya mumushandirapamwe wezvemari kuitira kuti vanogadzira vawane mari yavanoda kuti vatange nayo. Zvakare inouya ku GNU / Linux zita rinonakidza uye ndinotarisira kuti haringawire parutivi penzira sezvazvakaitika mune dzimwe nguva. Sekureva kwevagadziri vayo, mutambo uyu unokanganisa vateveri vazhinji veSaint Kotar uye kuti unogona kutoona muvhidhiyo iyo yandinokusiira nemharidzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Saint Kotar achauya kuKickstarter musi waApril 10, 2018